Maninona raha arotsaka? | Hevitra MPANOHARIANA
Tsy azo atao ambaninjavatra itony fanaintairana toy itony.
Nampidirin'i Hanta @ 17:17, 2011-12-17 [Valio]
fa le olona mipetraka eny @ le fako koa no tena loza kle
Nampidirin'i simp @ 19:56, 2011-12-17 [Valio]
Hevi-dravina(Tsy ho ela)
Atao hoatran'ny mandrotsaka vato vato @ fifidianana,mandrotsa-bary!izay no naha hoe ariana azy fa tsy hoe arotsaka satria zavatra tsy ilaina intsony!raha tsy hoe hisy fanodinana ny fako ho angovo angamba eto dago!
Nampidirin'i Hevi-dravina @ 11:03, 2011-12-19 [Valio]
Ahoana ny fanokafana blaogy vaovao e?Mankao @ hanokatra blaogy aho dia oops no hitako!!
Nampidirin'i Te hanao blaogy @ 11:19, 2011-12-19 [Valio]
Miditra ho mpikambana namana serasera mihitsy aloha ianao...raha eto no hanokatra
Nampidirin'i jentilisa @ 16:03, 2011-12-20 [Valio]
Tena izao vao hitako ilay Hevi-dravina etsy ambony etsy. Ilay fihetsika hoe ariana mihitsy no tsy mety satria tsy mitandrina ny Malagasy. Arotsaka ho fanolora-tena ho amin'ny fahadiovana no tena heviny...
Nampidirin'i jentilisa @ 18:21, 2011-12-24 [Valio]